पेश गर्ने - Wikimania 2014 in London
विकिमेनिया २०१४ लन्डन बार्षिक अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुको पंक्तिहरुको दशौ संस्करण हुनेछ जसले विकिमेडिया समुदाय तथा हाम्रा परियोजनामा साथ साथ हुन, आपसी लक्ष्य बाँड्नु तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सँग सँगै काम गर्ने अनुपन अवसर प्रदान गरि स ।
तपाई विकिमेडीया परियोजनाहरु (जस्तै विकिपेडिया, विकिबुक्स, विकिडाटा, विकिस्रोस, विकिन्यूज, विकिपेडिया कमन्स, विकिसनरी, मेडीयाविकि वा अन्यहरु) समुदाय मध्यको सदस्य हुनु हुन्छ, वा खुल्ला सामाग्री निर्माणकर्ता वा उपभोक्ता हुनु हुन्छ भने हामी तपाईको सत्रको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दछौं ।
‍‍== महत्वपूर्ण मितिहरु == The deadline for submissions has passed
प्रस्तावहरु माग खुल्ला मिति: १ जनवरी २०१४
प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मितिः ३१ मार्च २०१४
२.१ विकिसंस्कृती तथा समुदाय
२.२ प्रविधि, अन्तरविन्दु तथा पूर्वाधार
२.३ कानुनी तथा स्वतन्त्र संस्कृती
२.४ ग्लाम आउटरिच
२.५ शैक्षिक आउटरिच
२.६ खुल्ला छात्रवृत्ती
२.७ खुल्ला डाटा
३ प्रस्तुतीकरणको लम्बाई
४ पेश गर्ने
दशौ वार्षिक विकिमेनिया २०१४ अगस्ट ६ देखि १० सम्म लन्डनमा हुदैछ भने मुख्य कार्यक्रम ८ औ मा शुरु हुनेछ ।
विकिमेनिया २०१४ कार्यक्रमको ढाँचा यस प्रकार तयार गरिएको छ कि सम्मेलनका सहभागीहरुलाई विषय, वातावरण, तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण एक अर्कासँग सक्रिय सहभागीता हुने बहु संख्यक मौका मिल्नेछ । विकिमेनिया २०१४ मा लन्डनले स्थान जसले विकिमेनिया सम्मेलन पंक्तिको साधारण लक्ष्यहरुमा सरकार, सस्कृती, सञ्चार तथा शिक्षा ज्ञाताहरुमा इच्छा जगाई महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
विकिमेनिया पेश गर्ने तथा श्रोताहरुले धेरै कुराको एकै साथ आनन्द लिउन भन्ने हेतुले विकिमेनिया २०१४ मा प्रस्तुतीकरणका धेरै क्रमपंक्तिहरु हुने छन् । यद्यपी यी विस्तार हुने छन्, भइ रहेका छन्ः
लेख भन्दा पर त्यहाँ धेरै कुरा हुँदैछ; केही असामान्यहरु तयार गर्न त्यहाँ व्यक्तिहरुको जमातबाट आफै श्रृजीत ठूलो कुरा हुँदैछ । यो कसरी भई रहेको छ? यसले कसरी काम गर्छ? यो कता लम्किदैछ? के हामी यसरी सुधार गर्न सक्छौं ?
विकिमेडिया खुला विषय मात्र होइन,एक खुल्ला श्रोत पनि हो तथा यसमा धेरै महत्वपूर्ण फेरवदलहरु भई सकेका तथा हुने वाला छ ।
यदी तपाई प्राविधिक श्रोताहरुको खोजमा हुनु हुन्छ भने ह्याकथोनमा भाग लिनुहोस्, तथा आफ्नो सत्र पेश गर्ने सोच गर्नु होस् ।
संसारलाई विषय मुक्त बनाउन भनेको के हो? यो किन महत्वपूर्ण छ? व्यक्तिहरु कुन परियोजनाहरुमा काम गरि रहेको छन्? के तपाईले विषय मुक्त बनाउनको लागी केही ठूलो कार्य गर्नु भयो?
के तपाई केही लेख प्रकाशन वा उनीहरुको विज्ञतामा पहुँच गर्न ग्लाममा काम गर्नु भएको छ?
शिक्षामा विकिमेडीयालाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? के विद्यार्थीहरु यस समुदायका अभिन्न सदस्य हुन सक्छन्?
खुला पहुँच तथा खुला विज्ञान गतिविधिहरुले प्रगति गरेको अवस्थामा, कसरी शैक्षिक संस्थाहरुले विकिमेडियासँग कसरी अन्तरक्रिया गर्नेछ?
खुल्ला डाटा- सरकारमा, शिक्षामा, तथा अन्यमा - यस स्थान हो। विकिमेडीया गतिविधी अब विकिडाटा भएको छ । परियोजनामा प्रगती भएको छ? हामी यसबाट के गर्न सक्छौ? यो अन्य डाटा परियोजनाहरुसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्नेछ?
प्रत्येक वर्ष, हामी कहाँ ठूलो संख्यामा कार्यक्रमको लागी आवेदन पेश हुने गर्दछ । धेरै भन्दा धेरै राम्रा प्रस्तुतीकरणलाई समावेश गर्नको लागी प्रश्नोत्तरको समय समेत गरी प्रस्तावित शतको समय बढीमा ३० मिनेटमा सिमित गर्न हामी ठोस रुपमा सुझाव दिन्छौं । यदी तपाईको प्रस्ताव विशेषत ठूलो छ भने तपाईले थप समय माग गर्न भए थप समय दिइन सक्नेछ । यदी कार्यक्रमको समय कम भएमा कार्यक्रम समितिले तपाईले माग गर्नु भएको भन्दा कम समय पनि दिन सक्ने छ ।
प्रस्ताव पेश गरेर तपाईले मंजुर गर्नु पर्छ :
तपाईको प्रस्तावको सारांश अंश तथा सम्बन्धीत कुनै स्लाईडहरुलाई क्रियटिभ कमन्स एट्रिव्युट शेयर-अलाईक लाईशेन्स ३.० मा प्रकाशन गरिनेछ; तथा
स्वीकृत भएको खण्डमा, तपाईको शत्रलाई प्रशारण गरिनेछ तथा/वा रिकड तथा अडियो तथा/वा भिडियोमा उल्लेखत अनुमतीमा उपलब्ध गराईनेछ ।
यदी तपाई यी आवश्यकताहरु (उदाहरणको लागी, यदी तपाईको चलचित्र उतार गर्न चाहन्नु हुन) लाई अनादर गर्नु हुन्छ भने, कृपया कार्यक्रम समितिका सदस्यहरुसँग प्रस्ताव पेश गर्नु अगाडी कुरा गर्नु होस्।
तपाईको प्रस्तावहरु कार्यक्रम समितिद्वरा सार्वजनिक रुपमा छलफल तथा अंक प्रदान गरिनेछ, तथा तपाईलाई समितिको निर्णय सम्पर्क विवरण अनुसार जानकारी गराईनेछ । यदी तपाईको प्रस्ताव प्रारम्भिक फिरिस्तमा राखिएन भने कृपया हतोत साहित नहुनु होला: विकिमेनिया २०१४ ले अनौपचारिक, आफ्नै खर्चमा आउने तथा कार्य समूहका सहभागी तथा भाग लिने व्यक्तिहरुको लागी समय छुट्याउनेछ । तपाईसँग सम्मेलनमा आफ्नो विषयहरु राख्ने, सामाजिकरण हुने तथा आफ्नो विचार बाँड्ने प्रशस्त मौका पाउनु हुने छ । पेश भएको प्रस्तावहरुको सुची लागी, विकिमेनिया २०१४ पेशहरु हेर्नुहोस् ।
Retrieved from "https://wikimania2014.wikimedia.org/w/index.php?title=Submissions/ne&oldid=49881"